China Umgangatho ophezulu wehydroxyethyl cellulose yomzi mveliso wokutyabeka kunye noMthengisi | Longou
Kwizinga eliphezulu Hydroxyethyl neselulosi kushishino ukutyabeka
1. Imbonakalo ye-HEC Hydroxyethyl cellulose ayinancasa, ayinasongo kwaye ayinetyhefu emhlophe ukuya kumgubo omncinci omthubi oyityhefu.
2. I-ether yeselulose ether. I-HEC inemisebenzi yokuqinisa, ukwakha, ukukhupha amanzi, ukusasaza, ukuzinzisa kunye nokugcina amanzi. Iyanyibilika ngokulula emanzini abandayo kunye ashushu ukubonelela ngeendlela ezahlukeneyo zesisombululo se-viscosity, ifom yefilimu kunye nokunikezela nge-colloid.
3. I-HEC iqinisile i-electrolyte ephezulu. Amandla ayo okugcina amanzi aphindwe kabini njenge-MC. Inomgaqo olungileyo wokuhamba.
4. Ipeyinti elungileyo ye-emulsion ifuna i-rheology ekhethekileyo yokupeyinta ukuqinisekisa ukucoceka okuhle kunye nokuphelisa imizila yebrashi kumphezulu wefilimu eyomileyo. I-rheology inento yokwenza nobungakanani kunye nokuhanjiswa kwe-emulsion granules, ukanti ubungakanani kunye nokusasazwa kunento yokwenza nenkqubo yokuzinzisa kunye netekhnoloji ye-polymerization eyamkelweyo kwipolymerization.
5. I-polymerization ebangelwe kukusebenzisa i-HEC njengee-colloids ezikhuselayo ziya kuvelisa umgangatho we-emulsion ofanayo, ngaphandle komehluko kwiibhetshi ezahlukeneyo ze-emulsion: okwangoku ubukhulu be-emulsion granule bunokulawulwa ngaphakathi komda omxinwa kwaye iigrensi ziya kusebenza njengezinto eziyimfuneko ekunyuseni i-emulsion polymerization.
6. I-emulsion polymerizations edla ngokusebenzisa i-HEC njenge-colloid yokukhusela ibandakanya
IVinyl acetate kunye nezinye izinto zokunyibilikisa ezifana ne-acrylic tesin, butadiene resin para-butadiene resin ethylene njl.
7. I-methyl acrylic resin kunye nezinye i-monomers zokucoca ezifana ne-acrylate, butadiene njl. I-Styrene-acrylate copolymer, ikopi ye-styrene-butadlene mer, i-vinyl chloride-acrylate copplymer, i-acrylonitrile- butadiene copolmer.
Hydroxyethyl neselulosi ukutyabeka kushishino-1
Chwetheza I-HE30MC, i-HE50MC, i-HE100MC ...
Unizi lolwapho kuyiwa khona 250-550 (kg / cm 3)
Ubungakanani Particle (odlula 0.212mm)% ≥92
Ixabiso le-PH 5.0--9.0
Viscosity (2% isisombululo) I-300--10 00000S (mPa.s, NDJ-1)
1. I-HEC yeyona nto isetyenziswayo ngokuxhaphakileyo kwepeyinti yeLatex.
2. Ukongeza ukuqina kwipeyinti yeLatex, inemisebenzi yokunyanzela ukusasazeka, ukuzinzisa kunye nokugcina amanzi iipropathi zayo ziziphumo ezibonakalayo zokuqina, kunye nembala yezihlangu, ukwenza ifilimu kunye nokuzinza kokugcina.
3. I-HEC yi-nonionic cellulose ether enokusetyenziswa kuluhlu olubanzi lwe-PH. Inokuhambelana okuhle nezinye izinto, ezinje ngombala, izincedisi, iifiller kunye neetyiwa, ukusebenza kakuhle kunye nokulinganisa. Akululanga ukulahla i-sagging kunye nokusasaza.
➢ Ukusasazeka ngokulula kunye nokunyibilika emanzini apholileyo, akukho siqhuma
➢ Ukuxhathisa okugqwesileyo
➢ Ukwamkelwa kombala okugqwesileyo kunye nophuhliso
➢ Uzinzo olulungileyo
➢ Kulungile uzinzo lwe-bio. Akukho lahleko
Egqithileyo Ukugqwesa okugqwesileyo kwe-HEC kwimichiza yemihla ngemihla
Okulandelayo: I-viscosity ephezulu ye-HEC esetyenziselwa ukubhola ipetroleum
Ifilimu eyayisakuba sisicoci kunye nezithambiso
I-HEC kwishishini lokutyabeka
Izongezo zexesha elide ezivulekileyo
Imichiza yokwakha yokufuma